व्यपार / व्यवसाय Archives - Page 24 of 49 - Purbeli News
यस वर्षको माघे संक्रान्तिमा काठमाडौंमा तरुलको मूल्य सस्तिएको छ । माग भन्दा बढि तरुल बजारमा भित्रिएपछि यस वर्ष गत वर्षको भन्दा प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले तरुलको मूल्य सस्तिएको हो । माघे संक्रान्तिलाई तरुल, घिउ र चाकुको पर्वको रुपमा लिने गरिन्छ । यसै अवसर पारेर यो वर्ष तरुलको आयात धेरै भएपछि प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले यसको मूल्यमा कमी हुन गएको का...
इटहरी । सुनसरीको ईटहरी भन्ने बित्तिकै पुर्वी नेपालको मध्यभाग भन्ने आम बुझाई रहेको छ । ईटहरीको चौरास्तामा नपुगी पुर्बका कुनै पनि जिल्लामा आवातजावत गर्न प्रायः असम्भव जस्तै छ । त्यहि चौरास्तामा निर्माण भएको छ होटल बरण्डा । ईटहरीको चौरास्ता पुर्व उत्तरमा निर्माण भएको सो होटल ईटहरीको दृश्यावलोकनका लागी सबैभन्दा उपर्युत्त स्थान बनेको छ । १५ करोडको लगानी...
के तपाइ सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ । यस्ताे छ आजकाे बजार भाउ
काठमाडौँ / नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य लगातार बढेको छ । आज सोमबार सुनको मुल्य तोलामा २ सय रुपैयाले बढेको छ । आईतबार प्रति तोला ५९ हजार ५ सयमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मल्य आज तोलाको ५९ हजार ७ सयमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महाँसंघले जनाएको छ । आज तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ५९ अजार ४ सयमा किनबेच भईरहेको छ । त्यस्तै...
‘विराट ट्रेड एक्स्पो’ सम्पन्न
विराटनगर / बाइस करोडको आर्थिक कारोवारसहित ‘विराट ट्रेड एक्स्पो, २०१८’ आज यहाँ समापन भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको शङ्करपुरस्थित पुस ६ गदेखि १४ गतेसम्ममा लागेको व्यापार मेलामा एक लाख २५ हजारले अवलोकन गरेका छन् । नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका गरी २४० वटा कक्षमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि मेशिनरी पार्टपूर्जा, सवारी साधन, मोबाइल, तयारी पोशाक, कृ...
आज झन् बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य, दिनदिनै बढ्दैछ सुनकाे भाउ ।
काठमाडौँ / आज शुत्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य झन् बढेकाे छ । बिहीबार ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज २ सय रुपैयाँ बढेर ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि बढेको छ । आज तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । य...
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
काठमाडौँ / आज बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यसअघि ५९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज १ सय रुपैयाँ बढेर ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य बढेको छ । आज तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। यसअघ...
आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य
काडमाण्डौ / नेपाली बजारमा गएको बिहिवार यता सुनको मुल्य स्थीर रहेको सुनको मुल्य आज ह्वात्तै बढेको छ । यस अघि ५८ अजार ८ सय रुपैयामा कारोबार भएको छापावाल सुनको मुल्य आज ४ सय रुपैयाले बढेर ५९ हजार २ सय रुपौयामा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महाँसंघले जनाएको छ । त्यसैगरि आज तेजावी सुनको मुल्य पनि उकालो लागेको छ । आत जेजावी सुन प्रतितोल...
सुन चादीको मूल्य आज कति ? हेर्नुहोस् बजार भाउ
काठमाडौँ / पुस आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर छ । यसअघि ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज पनि ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि स्थिर छ । आज तेजावी सुन प्रतितोला ५८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । आज चाँदीको मूल्य...
मङ्गलवारे / इलाम सदरमुकाममा यही पुस २० गते लगानी सम्मेलन हुने भएको छ । कात्तिक २० गते गर्ने भनिएको तर अन्तिम समयमा स्थगन भएको लगानी सम्मेलन पुस २० गते हुने भएको हो । लगानी सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुने इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका लागि विभिन्न समयमा पु¥याउनुभएको योगदानको उच्च ...